धर्मेन्द्र अर्थात् भर्सटाइल गायकMain Samachar
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०९:१४ प्रकाशित
काठमाडौं । कला र संस्कृतिले पोखरेली माटोको गन्ध देश र विदेशमा परिचित छ। पोखराको माटोले कयौं हस्ती जन्माएको छ। जसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन्। साहित्य कला र संगीतको माध्यमबाट।
पोखरेलीको पहिचानको रौनकता थप्ने अग्रज पुस्तादेखि नयाँ पिँडीको भूमिका उल्लेख्य छ। जसले आफ्नो जीवन पोखरेली माटोसँग जोडेका छन्।
प्रकृतिको सुन्दरता पोखराको पोल्टामा छ। तर, प्रकृतिमात्र पोखराको पहिचान होइन्। यसमा अनेक रंग छन्। तिनै रंगमा मध्ये एक गीत र संगीत हो।
अलिमियाँ, धर्मराज थापा, बुद्धि परियारदेखि अहिलेपनि संक्रिय नेपथ्यले निर्माण गरेको इतिहासलाई अहिलेका कयौं युवा जमातले पोखरेली रंगमा रंग थप्न प्रयासरत छन्। अग्रज पुस्ताले निर्माण गरेको इतिहास जोगाउने जिम्मा सेवान जस्ता अहिलेको पुस्तामा आइसकेको छ।
नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा कयौं नाम पोखरासँग जोडिएको छ। अब उनीहरू पोखराको मात्र हुन् भन्दा एकलकाटे सोच हुन् सक्छ। किनभने उनीहरूको आवाज देशका कुनाकन्दरामा बज्छन्। ति स्वरका प्रशंसक देशदेखि विदेशसम्म छन्। अहिलेको युवा जमातहरुको भिडमा गायक तथा सर्जक धर्मेन्द्र सेवानको छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। ‘सबथोक भएर पनि रित्तो बाँच्न चाहन्न। म आफ्नो जिन्दगीलाई संगीतसँगै उठाउन, हिँडाउन र सुस्ताउन चाहन्छु’, एक भेटमा गायक सेवानले आफ्नो जीवनको एक मात्र लक्ष्य बारे सुनाएका थिए।
टोपी उनको ट्रेडमार्क हो। हाँस्न र हसाँइरहन मन पराउने उनी चुलबुले स्वभावका छन्। ‘एकबारको जूनिमा के दुखि हुनु र? हाँस्ने र हसाउँनुजस्तो खुशी अर्को कुनै हुन सक्छ र? उनी आफ्नै अन्दाजमा सुनाउँछन्।
व्यक्तिगत जीवनमा उनी जति चुलबुले पारामा रमाउँछन्। संगीतमा भने गम्भिर छन्। डेढ दशकसम्म उनी यसै क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्।
पछिल्लो समय ‘माया मारेर’ गीत बजारमा ल्याएर आफ्नो उपस्थिति जनाएका उनको यो गीतलाई पनि युवापुस्ताले खुबै रुचाएका छन्। दर्शकले मन पराएपछि यसैलाई एक सर्जकले आफूलाई सफल मान्दो हो। के उनीपनि आफूलाई सफल मान्छन् त?
‘गायनमा सफल र असफलको हिसाब त मसँग छैन। तर, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा १६ वर्षदेखि अनवरत संघर्षमा छु। मैले गरेको संघर्ष र मिहिनेत दर्शकले मन पराइदिनु भइरहेको छ। यसकारण म सन्तुष्ट छु’, उनी सुनाउँछन्, ‘मेरो सन्तुष्टलाई आधार मान्ने हो भने म सफल भने पक्कै हुँ भन्ने मेरो बुझाई हो।’
नेपाली संगीतको क्षेत्रमा बुद्दी परियारको महत्व र घनत्व छुट्टै छ। हेर्दा राम्रो’ ‘रेशम फिरिरी’ लगायतका गीत अहिले पनि नेपाली जनमानसको जिब्रोमा झुण्डिरहने गीत हुन्। तिनै सर्जकका छोरा हुन सेवान। सेवानको परिचय बुबाको नामबाट आवश्यक छैन। किनभने उनी आफैले आफ्नो परिचय निर्माण गरिसकेका छन्।
बुबाको प्रभाव, संगीतको मोह
करिब २०० भन्दा धेरै गीत बजारमा ल्याइसकेका सेवान परिवार नै संगीतमय भएकाले उनी यस क्षेत्रमा आएका होइनन्। शिक्षक बुबाको छोरो शिक्षक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन्। उनी गायनको शौखिन भएकाले यस क्षेत्रमा आएका हुन्। ‘मलाई मेरो बुबाले कहिल्यै गायक बन भनेर भन्नुभएन्। रहर जे छ त्यही गर भन्नुहुन्थ्यो। म मेरो रहर अनुसार बाँच्न पाउने अधिकार स्वतन्त्र थिए’, उनी सुनाउँछन्, ‘घरमा हुने संगीतको माहोलले गर्दा संगीतको गाहिराइ भने बुझ्दै गएको हुँ।’
नेपाली तारामा उनको उपस्थिति
वि.स २०५९ मा पोखरामै रेकर्ड गरेका थिए। ‘यो अँधेरी रातमा’ उनको एक चर्चित गीतमध्येको एक हो। गीत आएपनि नेपाली संगीतमा उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन चाहन्थे। त्यसपश्चात् पहिलो नेपाली तारा रियालिटी शो आएको थियो। उनले नेपाली तारा आफ्नो उपस्थिति आक्रामक तरिकाले देखाएका थिए।
प्रतिश्पर्धाको पहिलो शर्त जीत र हार हो। नेपालमा भएको पहिलो नेपाली ताराको उनी फाईनालिस्ट हुन्। त्यसबेला नेपाली तारा हुन त सकेनन् तर, नाम भने कमाए। उनीलाई लाग्छ, ‘प्रतिश्पर्धामा हार जित भइरहन्छ। मैले केहि अंकले हारे हुँला। तर, लाखौं दर्शकको माया पाए। नेपाली ताराले मलाई पहिचान स्थापित गर्न भने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई मैले भुल्नु हुँदैन।’
संगीतको आगो उनले नेपाली ताराबाट थप ओकल्न थाले। उनी गीत गाउन चाहन्थे। दर्शकको माया पाउन चाहन्थे। उनी सुनाउँछन्, ‘मैले दर्शकको माया चाहन्थे। तर, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइन। संगीत कर्म गरेर माया गर्नेहरूको माझ बस्न पाइरहूँ भन्ने मेरो लोभ हो।’
पोखरेली ब्याण्ड र उनको पहिलो एल्बम
पोखरा कुनै बेला ब्यान्‍डहरु राजधानी थियो। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विभिन्न व्याण्डहरुले सदावहार गीतहरु दिएका छन्। सेवानमा बाबुको गीतसँगसँगै लेकाली, कन्दरा,नेपथ्य,मध्याह्‍न ब्‍यान्‍डको प्रभाव थियो। उनी यी ब्याण्डहरुको प्रशंसक थिए। उनी गीत गुनगुनाउदैँ लेक साइडका गल्ली चहार्थे। डुँगामा बसेर फेवाताललाई आफ्नो गीत सुनाउथे। कहिले गीतार बजाउँदै सराङकोटको उकालो चढ्थे।
गीतार बजाउदैँमा र गीत गुनगुनाउदैमा गायक बनिदैन थियो। गायक बन्न आधिकारीक रुपमा गीत निकाल्नुपर्छ। दर्शकको माया पाउनुपर्छ। त्यपश्चात् उनले पहिलो एल्बम ‘द सेकेन्‍ड’, दोस्रो ‘मेरो आइडल’ बजारमा ल्याए। ति एल्बमलाई दर्शकले मन पराए। उनलाई गायकको परिचय दिए।
रिमेकमा जथाभावी प्रयोग
उनले आफ्ना गीत मात्र सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्। उनका बुबाका गीतलाई पनि पुन:रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याएका छन्। बुबाको गीत रिमेक गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। उनी त्यसबेलाको बुबाको मिहिनेतबारे कल्पना गर्छन्। ‘बुबाले गीत रेकर्ड गर्नलाई कति ज्यू हजुरी गर्नुभयो होला। कति जुत्ता फटाउनुभयो होला। ति मिहिनेत नयाँ पुस्ताले बुझेको छैन। अनि गीतमाथि जथाभावि प्रहार हुनु दुखद हो। गीतको मर्म र अस्तित्व गुम्दै गएपछि मैले बुबाको गीत रेकर्ड गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो’, उनी सुनाउछन्, ‘मेरो गायकी बुबाको जस्तो उचाईमा त नहोला। तर, मर्म नमारिकन गीत रिमेक भने गरेको छु कि भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ।’
बाबुको गीतहरू पुन : रेकर्ड गरेर उनले तेस्रो एल्बम ‘राष्ट्रको गीत’ बजारमा ल्याइसकेका छन्।
भर्सटाइल हुनुको रमाइलो पक्ष
उनी फरक-फरक स्‍टाइलको गीत गाइरहन्छन्। दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन्। लोक लय, पप, आधुनिक त कहिले फिल्मी शैलीमा उनले आफ्नो स्वर भरिरहेका छन्। यो शैली नै उनका लागि कहिलेकाही अफ्ट्यारोमा परिरहेको उनी सुनाउँछन्। गायकको स्वर भर्सटाइल हुनु एकदमै सुन्दर र राम्रो पक्ष हो। हरेक गीतलाई आत्मसाथ गर्दै फरक-फरक स्‍टाइलको गीत गाउनु गायकको खुबी पनि हो।
झ्याउरे गाउने सुन्ने दर्शकले उसैको पप नसुन्न पनि सक्छ। पप सुन्ने श्रोताले त्यही गायकको आधुनिक नसुन्न पनि सक्छ। फरक-फरक जनराका गीत गाउने भएकोले श्रोता कन्फ्युज हुने र सेवान हरायो कि के हो भन्ने जिज्ञासा दर्शकलाई हुने उनको अनुभव छ।
उनी सुनाउँछन्, ‘फरक फरक गीत गाउने भएकाले पनि ग्याप भएजस्तो देखिन्छ। हरेक शैलिका गीत समेट्न खोज्दा यस्तो देखिनु स्वभाविक हो।’
‘सेवान’ भनेको के हो?
गीत गाउनु र सिर्जना गर्नु उनको पेशा हो। देश तथा विदेशमा उनी गीत गाउन पुगिरहेका हुन्छन्। कतिपयले उनका गीत भन्दा उनको थरबारे जिज्ञासा राखिरहेका हुन्छन्। कतिपय मेला महोत्सवमा उनले सेवान भनेको के हो? भनेर प्रश्नको सामना गरिरहेका हुन्छन्।
‘सेवान अलि ‘युनिक’ शब्द लागेर कतिपयले जिज्ञासा राख्दा उनी रमाइलो पनि मान्छन्। कतिपय समयमा उनी ति जिज्ञासा मेटाइदिन्छन् पनि। उनले पंक्तिकारको पनि जिज्ञासा मेटाइदिए। उनले भने, ‘हरेक थरभित्र फरक-फरक हाँगा हुन्छन्। सेवान परियारको एक हाँगा हो। जातभित्र पनि युनिकनेस छ नी त। मलाई सेवान शब्दले मोहनी लगायो। त्यसपछि सेवान नै मेरो रोजाई पर्‍यो।’
सेवान उनलाई युनिक लागेर राखेका हुन्। नत्र थर राख्ने झन्झट सायद उनी राख्दैनथे। उनको बोलीले यो कुरा प्रष्टाउँछ। ‘ मलाई कुनै पनि जातप्रति न मोह छ, न वितृष्णा’, उनी सुनाउँछन्, ‘यहाँ हरे व्यक्ति मान्छेको रुपमा जन्मियो। यहि उसको पहिचान हो। म यो नियमभित्र बन्दि हुन चाहदिन्। जातभात सब बकवास हो।’
उत्कृष्ट रचनाले हृदय खोज्छ
हामीकहाँ एक सर्जकले अर्को सर्जकलाई प्रोत्साहित गरेको देखिदैन। यस कुरामा उनी सहमत देखिन्छन्। उनी सुनाउँछन्, ‘राम्रा कुरालाई जसले जसरी प्रोत्साहित गर्दापनि हुन्छ। तर, हामीकहाँ राम्रो कुराको चर्चा गर्न लोभ गरिरहेका हुन्छौं।’
सुन्दर रचनालाई सुन्न जरुरी छ। प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। हृदयमा बस्न जरुरी छ।’ एउटा असल सर्जक सिर्जनाले बाँच्ने कुरामा दुईमत छैन। सुखको जिन्दगी बाँच्नु चुनौती होइन। अर्थपूर्ण जीवन बाँच्नु चुनौती हो।
सुन्दर सिर्जनाले सर्जकको आयुको मृत्युपर्यन्त पनि जिवित राख्ने कुरामा उनी विश्वस्त छन्। ‘सिक्दै जाने हो। बुझ्दै जाने हो। सकेसम्म सुन्दर सिर्जना पस्किदै जाने हो’, उनले भने।